Igama omkhulu wengqephu Pierre Cardin is noma ubani ngisho kancane nesithakazelo fashion noma ukuvula umagazini ecwebezelayo ezaziwayo. Umuntu waphenduka izwe imfashini, efakazela ukuthi umqondo welithi "nemfashini" kuyinto ngempela kusebenza izingubo nsuku zonke, futhi ukuthi ungayigqoka into esefeshinini nsuku zonke. Abaningi yezenzo zakhe zibangelwa ngesikhathi emhlabeni wonke ezilahla, kodwa ngaleso sikhathi kuyoba ukubeka konke endaweni yayo.
Biography of Pierre Cardin
Maitre wazalelwa e-Italy ngo-July 2, 1922, kodwa uye waphila kulelizwe impela kancane. Lapho kuba sobala ukuthi hlobo luni Inqubomgomo kuholela Benito uMussolini, wonke umndeni nge Pierre kancane wayeshiye Italy futhi ngathuthela eFrance. umklami Ikusasa kwakuhluke kakhulu ngasekupheleni ingane. Ezalwa, uyise wayengumGreki kakade 60, nonina iminyaka 42. Kwaphela isikhathi eside lalibhekwa umndeni ibhizinisi iwayini, uye wabonisa ukuvuthwa kuso kodwa Pierre akafunanga silandela ezinyathelweni zabazali sina balithanda yaseshashalazini.
Ngemva kwalokho, Mnumzane Cardin uzokhumbula ukuphila kwakhe umkhaya awukwazi efudumele kakhulu. Kakade 18 washiya ikhaya lakhe, futhi engu-25 kuyoba uyintandane. Yenza imali ngandlela-thile esidingekayo, futhi kwaba isikhathi impela wasebenza ngiqeqeshwe endaweni Atelier ukuthunga, lapho wafunda izinto eziningi namaqhinga umsebenzi wabo esikhathini sangemva kwalokho.
Theatre kanye Per Karden
Bayalithakasela Isasasa Esinalo yaseshashalazini kuholele isinyathelo esibalulekile kuqala biography zokudala - wasebenza njengoba art umqondisi ifilimu "Beauty and the Beast." Khona-ke umklami elilandelayo uya emsebenzini ngaleso sikhathi kakade fashion house abadumile Kristiana Diora. Lapho kuxoxwa naye Cardin uzokhuluma Dior njengoba ephelele okuphambene layo. Ngokungafani abangamaKristu, kwadingeka abashisekeli yabo kanye bezimali, Per Karden wenze wonke umsebenzi wakhe futhi kamuva waba ezezimali amaphrojekthi amaningi.
Lapho ekugcineni wathola imfashini endlini yakhe Pierre Cardin, ngokushesha waqala ukuba amehlo, ethula izitayela fashion e into entsha, zokuhlola. Kuyinto kusukela ukuqoqwa Pierre Cardin for ukubukeka avant-garde isitayela. Wayekhona ngesikhathi umkhwabanisi, njalo zama amafomu amasha, ukudlala imibala.
Lokhu furor wenze obala ukuthi Mnumzane Cardin bachitha eNdlini Haute Couture, njengoba yayibizwa kanjalo ngaleso sikhathi wamukela, futhi esitolo izingubo ngomumo eyenziwe. Kulapho-ke waphambana abamele umsebenzi, futhi lokho lapho waxoshwa Syndicate Eliphakeme Fashion. Kodwa kwakungegazi revolution yangempela emlandweni embonini.
Kusukela ngaleso sikhathi izingubo imfashini kanye amasudi stylish abaklami abadumile baqala ukuvela izitolo kanye nezinye ezitolo, futhi izingubo ngokwawo ukulungele-to-bafake isibe kufinyeleleke kalula.
Ngesikhathi fashion Muses okukhulu kwakukhona abesifazane abaningi abadumile. Ngikhumbula Marlene Dietrich (ngesikhathi imvunulo yakhe), kanye ballerina Maya Plisetskaya. Uthando lweqiniso Pierre Cardin kwaba actress ethandwa Zhanna Moro. Ngalo, babehlala ndawonye iminyaka emine, kodwa imizwa efudumele baye benza konke ukuphila kwakhe konke, futhi ngisho kwamanje ulondoloze ubungane obuseduze kakhulu.
igama Mnumzane Cardin manje - Kungaphezu igama couturiers okukhulu. Fashion design master akugcini. He qamba ifenisha, wafunda design elingaphakathi futhi amakha, wabambisana izinkampani zezimoto. Ngathenga indlu futhi has ekuchithweni kwayo inethiwekhi zokudla. построил несколько отелей, магазинов, кафе. Ngaphezu kwalokho, umnikazi saso sonke lesi sigodi, okuyinto uyakhile eziningi amahhotela, izitolo, amathilomu. Futhi manje, uma unesikhathi esifushane khulula, ujabulela kuvakashelwa indawo ozithandayo.
"Bengilokhu ngiwuhlobo nomuntu beziphakamisa" - wathi Per Karden e izingxoxo zakhe. - "kodwa eminyakeni uyaqaphela ukuthi injabulo yangempela uma uhamba ukuze umgomo wakho."
Denis Nikiforov: Filmography, biography nomndeni
Yini i-ID imibango ku isitambu, futhi uzisebenzise kanjani?
USophia, Princess: Biography, izithombe, phakathi nokubusa
Isipelingi tijobelelo ka participles: indlela accustom azithathele "n" kabili